प्रकाश दाहाल को थिए? सशस्त्र योद्धादेखी आर्यघाटसम्म उनको कहानी यस्तो छ – Rastriyapatrika
प्रकाश दाहाल को थिए? सशस्त्र योद्धादेखी आर्यघाटसम्म उनको कहानी यस्तो छ
आईतबार बिहानैदेखि मिडिया र सामाजिक सञ्जाल प्रकाश दहालको निधनको खबरले छाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनको मृत्युको बिषयलाई लिएर अनेक टिकाटिप्पणी समेत भईरहेका छन । माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’का पुत्र प्रकाशको आईतबार बिहान निधन भएको हो ।
पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेपछि नै प्रचण्डको सचिवालयमा काम गरेका उनी विनासँग विवाह गरेपछि निलम्बनमा परे। उनको जिम्मेवारी खोसियो। संविधानसभाको चुनावपछि २०७० माघदेखि भने पुन: उनलाई सचिवालयमा पठाइयो। त्यसयता उनले बुबा प्रचण्डकै सुरक्षा सहयोगीका रुपमा खटिँदै आएका थिए। प्रकाशले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले दिएको सुप्रवल जनसेवाश्री पदक भने बहिष्कार गरे।
उनले त्यो बेला फेसबुकमा वालमा ’आफू गणतन्त्र ल्याउनका लागि संघर्ष गरेको व्यक्ति भएको तर कुनै पदकका आकांक्षी नभएको’ स्पष्टीकरण दिएका थिए । स्व.प्रकाशप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !पुर्बेली न्युज